Lego Creator 3-in-1 ၃၁၁၂၀ အလယ်ခေတ်ရဲတိုက်ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းနှင့်ပြခန်း
03 / 08 / 2021 04 / 08 / 2021 Dimitri 433 Views စာ0မှတ်ချက် 21325 အလယ်ခေတ်ပန်းပဲဆရာ, 31109 ပင်လယ်ဓားပြသင်္ဘော, 31120 အလယ်ခေတ်ရဲတိုက်, 375 ရဲတိုက်, 6074 က Black Falcon ရဲ့ခံတပ်, ရဲတိုက်, Classic ရဲတိုက်, ဖန်ဆင်းရှင်, Creator 3-in-1, Ideas, Lego, Lego ရဲတိုက်, Lego ဖန်တီးသူ, Lego Creator 3-in-1, Lego Ideas, Lego Minifigures, lego ပြန်လည်သုံးသပ်, သေးသေးလေး, reviews
Lego Creator 3-in-1 31120 အလယ်ခေတ်ရဲတိုက်aအတွက်လွမ်းဆွတ်ခြင်းကိုပေါင်းစပ်ထားသည် classic ခေတ်သစ် p နှင့်အတူဆောင်ပုဒ်arts နှင့်နည်းစနစ်များ - လက်တွေ့ကျပြည့်စုံသောရလဒ်များဖြင့်
တစ်ခုခုမေးပါ Lego အချို့သောအသက်အရွယ်ကိုနှစ်သက်သောသူတို့၏ငယ်ဘဝသည်အဘယ်နည်း Lego အမှတ်တရတွေရှိခဲ့ရင်မင်းလောင်းနိုင်ပါတယ် Lego ရဲတိုက်အခင်းအကျင်းကိုဖော်ပြထားသည်။ Lego ၁၉၇၈ တွင်ပထမဆုံး 'Yellow Castle' (၃၇၅ ရဲတိုက်) ကိုစတင်မိတ်ဆက်ကတည်းကရဲတိုက်သည်လူကြိုက်များခဲ့သည်။
ရဲတိုက်များသည် ပို၍ လက်တွေ့ကျလာသည်၊ ၁၉၈၀ ခုနှစ်များအလယ်တွင်အကြောင်းအရာ၏ကျော်ကြားမှုသည်ပေါက်ကွဲထွက်လာသည်၊ ရဲတိုက်များသည် ပို၍ လက်တွေ့ကျလာသည်၊ မတူညီသောသူရဲကောင်းများကိုစတင်မိတ်ဆက်ခဲ့သည် (လေးသမားများနှင့်တူသောသူရဲကောင်းများကဲ့သို့) မိတ်ဆက်ပွဲများ၊ Black Falcons နှင့် Forestmen ကဲ့သို့ကွဲပြားသောအဖွဲ့များသည်မြင်ကွင်းသို့ရောက်လာပြီးအကြောင်းအရာကိုချဲ့ထွင်ခဲ့သည်။ အလယ်ခေတ်ကမ္ဘာတစ်ခုလုံးကိုဖန်တီးရန်ခံတပ်နံရံများ ကျော်လွန်၍
ငါတို့ပြန်လာဖို့မမျှော်လင့်သင့်ဘူး Lego မည်သည့်အချိန်တွင်မဆိုပိုမိုကြီးမားသောရဲတိုက် Creator 3-in-1 theme တစ်ခုဖြစ်လာသည် ဝိညာဉ်ရေးရာအိမ် retro အပြင်အဆင်များအတွက်ပရိတ်သတ်ဟောင်းနှစ် ဦး စလုံးအားလွမ်းဆွတ်ခြင်းနှင့်ပရိသတ်အသစ်များကစိတ်ရှုပ်စရာအကြောင်းအရာကိုကြည့်ရန်အခွင့်အလမ်းကိုပေးသည်။ မနှစ်ကပေါ့ 31109 ပင်လယ်ဓားပြသင်္ဘော တစ် ဦး ကိုပြန်လည်ကြည့်ရှုရန်မယုံနိုင်လောက်အောင်နာမည်ကြီးသောနည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်ကြောင်းသက်သေပြခဲ့သည် classic theme, ဒါကြောင့်ပါလိမ့်မယ် 31120 အလယ်ခေတ်ရဲတိုက် တူညီသောမှော်ဖော်မြူလာကိုထိနိုင်ပါသလား။
theme: Creator 3-in-1 အမည်သတ်မှတ်မည် - 31120 အလယ်ခေတ်ရဲတိုက် ဖြန့်ချိ: ဇြန္လ 1, 2021
စျေးနှုန်း: £ 89.99 / $ 99.99 / € 99.99 အပိုင်းပိုင်း: 1,426 အသေးစားပုံများ: 4
သင်နှင့်အကျွမ်းတဝင်မရှိလျှင် Creator 3-in-1 subtheme (မင်းရဲ့အာရုံစူးစိုက်မှုအတွက်ယှဉ်ပြိုင်လိုတဲ့လိုင်စင်အစုံအားလုံးနဲ့မင်းကိုဘယ်သူကမှအပြစ်မတင်နိုင်ဘူး)၊ အဲဒါတွေကအုတ်သုံးလုံးနဲ့တည်ဆောက်ထားတဲ့ပုံစံတွေဘဲ၊ ပုံစံတစ်ခုသာတည်ဆောက်နိုင်တယ်။ ၌ 31120 အလယ်ခေတ်ရဲတိုက်အဓိကပုံစံမှာရေစိုခံ၊ ရာဇပလ္လင်၊ ထောင်အချုပ်ခန်းများ၊ တာဝါတိုင်များနှင့် drawbridge တို့နှင့်ပြည့်စုံသောအထင်ရှားဆုံးခံတပ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ဒုတိယပုံစံသည်အလုပ်လုပ်ရန် trebuchet ပါသောမျှော်စင်တစ်ခုဖြစ်ပြီးနောက်ဆုံးပုံစံမှာအလုပ်လုပ်နေသောလေရဟတ်များနှင့်အတူအလယ်ခေတ်စျေးကွက်ဖြစ်သည်။
အဆောက်အဦး Lego ရဲတိုက်ဆိုတာအဲဒါကိုအမှတ်ရစရာ Lego အချို့သောစပျစ်သီးများကိုပရိသတ်များနှစ်သက်စွာပြန်ကြည့်ကြလိမ့်မည်။ သူတို့ဟာဆောက်လုပ်ရေးကိုအမြဲ ၀ မ်းသာနေခဲ့သလို၊ နောက်ဆုံးမော်ဒယ်ကခန့်ညားတဲ့ပုံပေါက်နေပြီး၊ တစ်ချိန်က - စုဆောင်းမှုမှာအကြီးဆုံးမော်ဒယ်တွေထဲကတစ်ခုဖြစ်ခဲ့တယ်။ မွမ်းမံထားသောလွမ်းဆွတ်ခြင်းခံစားချက်များသည်ဤတည်ဆောက်မှုအတွင်းဘယ်တော့မှဝေးကွာသွားခြင်းမရှိ၊ မွမ်းမံထားသော Black Falcon သူရဲကောင်းသည်ပထမဆုံးသောအိတ်ထဲမှလက်နက်ကြီးကျလာသည်။ classic လေးနှင့်မြှား၊ ရဲတိုက်သည်တစ်ဖက်တစ်ချက်စီသို့ ဦး တည်သွားသောလမ်းသို့
အဲဒါတွေကိုပြန်ကြည့်တယ် classic ရဲတိုက်သည်ယခုနှင့်အတူရှိသည် 31120 အလယ်ခေတ်ရဲတိုက် လက်ထဲမှာ - ဘယ်လောက်လဲရှင်းပါတယ် Lego p သည်အုပ်စုလိုက်တိုးတက်လာသည်artရရှိနိုင်သော၊ နည်းစနစ်များနှင့်မျှော်လင့်ချက်များ၊ ၎င်းသည်ဤအစစ်အမှန်ကိုထွန်းလင်းစေသောအကြောင်းအရင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းတွင်a၏ဖန်တီးမှုအားလုံးရှိသည် classic ရဲတိုက်အစုံ၊ ဒါပေမယ့်အလွန်ရှင်းလင်းစွာခေတ်မီသောတစ်ခုဖြစ်သည်။
အာရုံစူးစိုက်တတ်တဲ့သူတွေအတွက် Lego သမိုင်း၊ ဒါဟာလှုံ့ဆော်မှုအတွက်အစောကြီးကတည်းကသိသာထင်ရှားပါတယ် 31120 အလယ်ခေတ်ရဲတိုက် ၁၉၈၆ ခုနှစ်မှလာသည် classic ၆၀၇၄ Black Falcon's Fortress ရှေးခေတ်ခံတပ်ကြီးသည်အဝါရောင်နှင့်အနက်ရောင်အဆောက်အအုံနှင့်အတူအရှေ့ဘက်တွင်မျှော်စင်ကြီးနှစ်ခုပါ ၀ င်သည်။ ထိုဒီဇိုင်းကိုပုံစံခွက်တစ်ခုအဖြစ် သုံး၍ ဤနေရာရှိအရာအားလုံးကိုထည့်ပြီးမြှင့်တင်ခဲ့သည်။
ဒီဇိုင်နာများသည်အရောင် palette ကိုရောစပ်ပြီးမီးခိုးရောင်တစ်ရိပ်သာပါ ၀ င်သောရဲတိုက်တစ်ခုမှအဝေးသို့ထွက်ခွာသွားသည်၊ ၎င်းသည်ပိုမိုစိတ်ဝင်စားမှုနှင့်စစ်မှန်မှုကိုဖန်တီးပေးသည်။cityမရ။ ရဲတိုက်၏အောက်ဆုံးအလွှာများထဲတွင်အနက်ရောင်နှင့်သဲအရောင်ရှိသောအစိမ်းရောင်များရောစပ်ပုံသည်အလွန်ကောင်းမွန်သည်။ ၎င်းသည်ပြီးစီးသောရဲတိုက်၏အသွင်အပြင်ကိုအလွန်ကောင်းမွန်စေပြီးအလွန်ကြိုဆိုသော update တစ်ခုဖြစ်သည်။ အုတ်ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောမှိုများနှင့်သစ်ပင်ငယ်လေးများသည် ပို၍ အသေးစိတ်ထည့်ရန်ကူညီသည်။
ရဲတိုက်များ၊ ပြတင်းပေါက်များ၊ နံရံများ၊ drawbridge နှင့်တာဝါတိုင်များအားလုံးသည်နည်းစနစ်အသစ်များကြောင့်ကြီးမားစွာတိုးတက်လာသည်။art၎။ ရှေးခေတ်ရဲတိုက်များသည်မြှားပစ်ရန်ကွက်လပ်ကွက်လပ်တစ်ခုနှင့်နံရံတစ်ခုတည်းကိုသုံးလိမ့်မည်၊ သို့သော်ဤနေရာတွင် ၁ × ၂ အုတ်ကြွပ်များဖြင့်တည်ဆောက်ထားသောမြှားများနှင့်အတူဤနေရာတွင်တူညီသောဒီဇိုင်းကိုရရှိသည်။ ၎င်းသည်ပါးနပ်သောဒီဇိုင်းတစ်ခုသာမဟုတ်၊ မယုံနိုင်လောက်အောင်တိကျသည်။
ရဲတိုက် barbican ကိုပြုလုပ်သောတာဝါတိုင်နှစ်ခုသည်ချဉ်းကပ်လမ်းတစ်လျှောက်ရှိစစ်တိုက်များအတွက် pentagonal ကြွေပြားများ သုံး၍ အံ့သြဖွယ်ကောင်းသောစုဝေးမှုဖြစ်သည်။arts နှင့် drawbridge အတွက်အသုံးပြုသောနည်းစနစ်သည်အလွန် sm ဖြစ်သည်artမရ။ ရှည်လျားသောဆွဲကြိုးနှစ်ခုကို drawbridge ၏အောက်စွန်းများနှင့်aသို့ဆက်သွယ်ထားသည် နည်းပညာ ဝင်ပေါက်ထိပ်တွင်ထိုင်သောဝင်ရိုး
ဒါပြီးရင်aနဲ့ချိတ်လိုက်ပါ နည်းပညာ နံရံ၏ဘေးဘက်တွင်ထိုင်သောဘားလေးချောင်းပါ ၀ င်သည်။ ဝင်ရိုးကိုလှည့ ်၍ မြှင့်လိုက်ပြီး drawbridge ကိုနိမ့်စေသည်။ ၎င်းသည်ကြိုးတစ်ချောင်းကို သုံး၍ လည်ပတ်ရန်နှင့်တည်ဆောက်ရန်အတော်လေးအလွန့်အလွန်ဟောင်းနွမ်းနေသောရဲတိုက်ဟောင်းများတွင်သိသာထင်ရှားသော update တစ်ခုကိုပြသောသေသပ်သောကစားနည်းတစ်ခုဖြစ်သည်။
အံ့သြစရာကောင်းသည်မှာအိတ်တစ်ဝက်ထက်နည်းသောအရာသည်ပုံသဏ္ာန်အားလုံးပြောင်းလဲပြီးဖြစ်သည်၊ ထို့ကြောင့်တည်ဆောက်မှုပြီးစီးပါကအဆင့်မြှင့်တင်ထားသော 6074 Black Falcon's Fortress ကိုအလွန်လျောက်ပတ်စွာကိုယ်စားပြုလိမ့်မည်။ မရ။ နောက်ဆုံးမော်ဒယ်သို့ရောက်သောအသေးစိတ်နှင့်အရွယ်အစားကိုအသေးစိတ်မမှတ်ယူသင့်ပေ။
ရဲတိုက်ရဲ့တစ်ဖက်တစ်ချက်စီကိုတည်ဆောက်ရတာပျော်စရာကောင်းတယ်။ တစ်ဖက်တစ်ချက်တွင်ရာဇပလ္လင်ခန်း၊ ပန်းပဲဆရာ၏အလုပ်ရုံနှင့်ရေဘီးတစ်လုံးတို့ပါ ၀ င်သည်။ ရေဘီးကိုပန်းပဲသမား၏တူနှင့်ချိတ်ဆက်ထားပြီး၎င်းကိုလှန်လိုက်သောအခါလျှံကိုရိုက်သည်၊ ၎င်းသည်သပ်ရပ်သောထိတွေ့မှု၊ ပြီးပြည့်စုံသောမမျှော်လင့်နိုင်သောကစားနိုင်သည့်အင်္ဂါရပ်တစ်ခုဖြစ်သည်။
အတွင်းပိုင်းကဏ္sectionsများသည်အမှန်တကယ်သတ်မှတ်သည့်နေရာဖြစ်သည်artဒါဟာခေတ်သစ်ခေတ်မှာဒီဇိုင်းထုတ်ထားတာနဲ့တူတယ်။ အခန်းအသီးသီးကသူတို့ကိုယ်တိုင်ကသိပ်မကြီးဘူး၊ ဒါပေမယ့်အသေးစိတ်တွေနဲ့ပြည့်ကျပ်နေသေးတယ်။ အလွန်တရာလျောက်ပတ်သောအုတ်ဖြင့်တည်ဆောက်ထားသောကုလားထိုင်ကိုပန်းပဲဆရာ၏အလုပ်ရုံထက်တွင်တွေ့နိုင်သည်၊ အလုပ်ရုံ၌အောက်၌တူနှင့်သံတူ၊ မီးဖို၊ သံချပ်ကာအစုံနှင့်ဖုံးကွယ်ထားသောဘဏ္chestာရင်ဘတ်တို့ရှိသည်။
ရဲတိုက်၏အခြားတစ်ဖက်တွင်ဈေးငယ်တစ်ခု၊ ထောင်တစ်ခုနှင့်သစ်သားမျှော်စင်တို့ပါ ၀ င်သည်။ ဈေးငယ်သည်အနီရောင်နှင့်အနက်ရောင်အနီရောင်ကာလာများနှင့် (၁ × ၄ ကွေးသောတောင်စောင်းများမှပြုလုပ်သော) မိုးကာနှင့်အတူထောင်ထဲတွင်အရိုးစုတစ်ခုပါ ၀ င်သည်။ တဖန်မျှော်စင်သည်မယုံနိုင်လောက်အောင်စစ်မှန်။ ကြည့်ရှုပြီးအလယ်ခေတ်ကာလတစ်ခု၏အသွင်အပြင်ကိုအောင်မြင်စွာဖမ်းယူသည်။
အတွင်း၌အတော်လေးအဖြစ်များသည် Creator 3-in-1 အဓိကပုံစံခွက်များထက်အုတ်ဖြင့်တည်ဆောက်ထားသောတိရစ္ဆာန်များကိုထည့်သွင်းထားသည်။ ရဲတိုက်၏ထိပ်တွင်ထိုင်နေသောကျီးသည်အားအပျော့ဆုံး၊ ကြီးမားပြီးအနည်းငယ်ရှုပ်ထွေးသည်။ ပန်းပဲဆရာရဲ့အလုပ်ရုံကကြွက်ကအရမ်းကောင်းတယ်၊ ဒါပေမယ့်မယုံနိုင်လောက်အောင်ရိုးရှင်းတယ်၊ ဒါပေမယ့်တကယ့်ကိုသပ်ရပ်တဲ့ကိုယ်စားပြုမှုလေးပါ။
ကြက်များနှင့်ကြက်ဖများသည်တောက်ပသောတည်ဆောက်မှုလေးများဖြစ်ပြီးရေစက်ပေါ်တွင်ထိုင်သောမိုးပျံလေယာဉ်အတွက်တူညီသောနည်းကိုသုံးသည်။ သို့သော်နဂါးသည်တည်ဆောက်ရန်အလွန် ၀ မ်းမြောက်သည်။ ဘောလုံးနှင့် socket အဆစ်များနှင့်ဆက်သွယ်ထားသောအပိုင်းများတွင်တည်ဆောက်ထားသောသားရဲသည်မယုံနိုင်စရာကောင်းပြီးများစွာရှိသည် artကိုယ်ဟန်အနေအထားအတွက်ရွေးချယ်မှုများကအကန့်အသတ်နီးပါးရှိသည်။ ဒါဟာတကယ့်ကိုအံ့မခန်းဒီဇိုင်းပါပဲ။
ပေါင်းလိုက်တော့ parts များကိုအတူတကွထားရှိပြီး၎င်းသည်အလွန်စွဲမက်ဖွယ်ကောင်းပြီးအသေးစိတ်ရဲတိုက်တစ်ခုနှင့်စပျစ်သီးတစ်လုံး၏တကယ့်ခေတ်မီအဆင့်မြှင့်တင်မှုဖြစ်သည် classicမရ။ ၎င်းသည်အသေးစိတ်များပြည့်နှက်နေသည်၊ အတွင်းနှင့်အပြင်နှစ်ခုစလုံးတွင်တောက်ပစွာဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားပြီးကောင်းစွာစီမံထားသော play features များစွာရှိသည်။ ဘေးတိုက်များနှင့်ရှေ့ညှပ်များကိုပတ္တာများမှတစ်ဆင့် တွဲ၍ တည်ဆောက်ထားသောကြောင့်ရဲတိုက်သည်ရှည်လျားသောတည်ဆောက်မှုတစ်ခုဖြစ်အောင်ပြုလုပ်နိုင်သည်။
၎င်းသည်အလွန်ပျော်စရာကောင်းသောတည်ဆောက်မှုနှင့်အံ့သြဖွယ်ကောင်းသောပုံစံဖြစ်ပြီး ap ကိုယူရန်ခက်ခဲသည်art ကျန်တဲ့မော်ဒယ်နှစ်ခုကဘာကိုကြည့်မလဲ 31120 အလယ်ခေတ်ရဲတိုက် ကမ်းလှမ်းရန်ရှိသည်။ ဒါပေမယ့်အဲဒါကတကယ်ကိုအရောင်းရဆုံးအချက်တစ်ခုပါပဲ Creator 3-in-1 set: အုတ်တစ်ချပ်တည်းကိုသာ သုံး၍ အောင်မြင်နိုင်သည့်အရာများကိုလေ့လာခြင်း။
တာဝါတိုင်သည်ထိုခေတ်ကာလ၏ဗိသုကာလက်ရာများစွာကိုထိန်းသိမ်းထားသည်၊ ထို့ကြောင့်ပြတင်းပေါက်များနှင့်ပြတင်းပေါက်များကဲ့သို့နေရာများ၌ရဲတိုက်နှင့်တူသည်။ အခြားဒေသများသည်နံရံများကိုအလှဆင်သောအလွန်ကောင်းသောနဂါးခေါင်းမှုတ်တံများ၊ တတိယထပ်၌ထိုင်သောအဂ္ဂိရတ်ပညာရှင်၏စားပွဲနှင့်မျှော်စင်၏ထိပ်၌ရှိသောတယ်လီစကုပ်တို့အပါအ ၀ င်နည်းသစ်များကိုအသုံးပြုသည်။
ထူးခြားချက်မှာထောင့်ချိုးအစုအဝေးတစ်ခုအဖြစ်တည်ဆောက်ထားသောထောင်ဆဲလ်နံရံဖြစ်ပြီးဘောလုံးနှင့် socket ပူးတွဲမှတဆင့်တာဝါသို့ဆက်သွယ်သည်။ ၎င်းသည်မျှော်စင်မှလွတ်ကင်းရန်ခွင့်ပြုသည်၊ အကျဉ်းသားများလွတ်နိုင်သည့်အပေါက်ကြီးတစ်ခုကိုဖော်ထုတ်သည်။
နေရာများတွင်ပုံဖော်ခြင်းသည်အလွန်ကောင်းမွန်သည်။ ရေဘီးအတွက်သုံးသောမုတ်သည်မျှော်စင်၏အပေါ်ဘက်၌ပြတင်းပေါက်တစ်ခုအဖြစ်အသွင်ပြောင်းသွားပြီးအလွန်ထိရောက်မှုရှိသည်၊ မျှော်စင်ထိပ်ကို ဖြတ်၍ အသုံးပြုသောနက်ပြာရောင်တောင်စောင်းများသည်အလွန်ကြည့်ကောင်းသည်။ ရဲတိုက်ရဲ့အဝင်ဝကို ဦး တည်တဲ့သေးငယ်တဲ့လှေကားထစ်တွေနဲ့တံတားလေးတွေကတောက်ပပြီးအချောထည်ပုံစံကိုခြုံငုံကြည့်စေမှာပါ။
အဓိကရဲတိုက်သည်ကောင်းစွာထိန်းသိမ်းထားသောအဆောက်အအုံတစ်ခုကဲ့သို့ခံစားရပြီး၎င်း၏စျေးနှင့်ရေဘီးနှင့်ပန်းပဲဆရာ၏အလုပ်ရုံတို့ရှိနေရာများသည်ပြတင်းပေါက်များကျိုးပဲ့ပျက်စီးခြင်း၊ နံရံများနှင့်အပြင်ဘက်ပတ်လည်၌သစ်ရွက်များကြီးထွားလာခြင်းကိုခံစားရသည်။ ၎င်းသည်ရှေး wizard တစ်ခုသို့မဟုတ်အရူးအဂ္ဂိရတ်ပညာရှင်၏ပုန်းခိုရာနေရာမှအလွန်ထင်ရှားသည် - သူတို့၏အလယ်ခေတ်စိတ်ကူးယဉ်များကိုကစားရန်စိတ်အားထက်သန်နေသောလူငယ်တည်ဆောက်သူများ၏စိတ်ကူးစိတ်သန်းကိုသံသယဖြစ်စေမည်မှာသေချာသည်။
နောက်ဆုံးမော်ဒယ်အတွက် 31120 အလယ်ခေတ်ရဲတိုက် ယခင်နှစ်ခု၏ပေါင်းစည်းမှုကဲ့သို့ခံစားရသည်။ လက်နက်တိုက်တင်းကုပ်နှင့်မုန့်ဆိုင်ငယ်တစ်ခု၊ အလယ်မျှော်စင်ငယ် (ယခင်ပုံစံနှစ်ခုကိုဒီဇိုင်းတူဝေမျှခြင်း)၊ အလုပ်လုပ်နေသောလေရဟတ်တစ်ခုနှင့်ပစ်မှတ်တစ်ခုပါသောသစ်ပင်ငယ်တစ်ခုတို့ကတူရိယာတစ်ခုဟုယူဆရသည်။ ဒီနှစ်ရဲ့ထူးခြားချက် 21325 အလယ်ခေတ်ပန်းပဲဆရာ.
တာဝါတိုင်၊ ဈေးဆိုင်နှင့်လေရဟတ်များအားလုံးကိုသီးခြားစီချိတ်ဆွဲထားပြီးကွဲပြားခြားနားသောဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံများစွာကိုခွင့်ပြုသည်၊ တွဲပါလာသောသစ်ပင်နှင့်လက်နက်တိုက်များနှင့်အတူပြသရန်နှင့်ကစားရန်ရွေးချယ်စရာများလည်းပိုဖြစ်နိုင်သည်။ ၎င်းသည်သုံးမျိုးလုံး၏စွယ်စုံရဆုံးတည်ဆောက်မှုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်အံ့သြဖွယ်ကောင်းသောမြင်ကွင်းတစ်ခုကိုဖန်တီးသည်၊ ရှေးခေတ်ကမ္ဘာ့အလယ်ခေတ်မြို့တစ်မြို့ကိုအလွန်အမှတ်ရစေပြီးအုတ်အနည်းဆုံးကိုသုံးသည်၊ ထို့ကြောင့်အခြားဘက်များထပ်မံတည်ဆောက်ရန်အကန့်အသတ်ရှိသည်။
ဖန်ဆင်းရှင်အစုံများကဲ့သို့ပင်အဓိကမော်ဒယ်သည်အထင်ရှားဆုံးနှင့်အပျော်ဆုံးဖြစ်သည်မှာသေချာသည်၊ သို့သော်အခြားနှစ်ခုမှာအတူတကွရှိနေရန်ထိုက်တန်သည်။ ပြောကြတယ်၊ ဒီ set မှာတည်ဆောက်ပုံတွေကအများအားဖြင့်မတူကြဘူး၊ အထူးသဖြင့်တူတာတစ်ခုနဲ့နှိုင်းယှဉ်တယ် 31109 ပင်လယ်ဓားပြသင်္ဘောမော်ဒယ်သုံးယောက်သည်တစ်ယောက်နှင့်တစ်ယောက်အလွန်ကွဲပြားခြားနားသည်ဟုခံစားရသည်။ ၌ 31120 အလယ်ခေတ်ရဲတိုက်တည်ဆောက်မှုသုံးခုစလုံးသည်၎င်းတို့အားလုံးသည်တူညီသောပိုကြီးသောရှုပ်ထွေးမှုအတွင်းတွင်ပိုတူသည်ဟုခံစားရသည်။
အကယ်စင်စစ်သင်သည်မိတ္တူသုံးစောင် ၀ ယ်ယူပါကတာ ၀ န်၊ catapults များ၊ စျေးများနှင့်လေရဟတ်များပါ ၀ င်သောအလွန်အံ့သြဖွယ်ကောင်းသောရဲတိုက်တစ်ခုကိုသင်ဖန်တီးနိုင်သည်။ ဒါပေမယ့်မင်းကတူညီတဲ့သုံးမျိုးကို ၀ ယ်ဖို့စိတ်မ ၀ င်စားဘူး၊ ငါတို့အားလုံးငွေနဲ့လုပ်ထားတာမဟုတ်ဘူး၊ အထူးသဖြင့်မင်းကိုလွမ်းဆွတ်နေတဲ့သူဆိုရင်ဒီကနေ ၀ မ်းမြောက်စရာအများကြီးကျန်သေးတယ်။ ပြင်ရန်
၎င်းတွင် minifigures သုံးခုပါ ၀ င်သည် 31120 အလယ်ခေတ်ရဲတိုက်အရိုးစုကိုရေတွက်လျှင် (သို့) လေးခု ရဲတိုက်ကိုခုခံကာကွယ်ခြင်း (သို့မဟုတ်မျှော်စင်ကိုတိုက်ခိုက်ခြင်း) သည်အံ့သြဖွယ်ကောင်းသော Black Falcon သူရဲကောင်းနှစ်ကောင်၊ အမျိုးသားတစ် ဦး နှင့်အမျိုးသမီးတစ် ဦး (အချိန်နှင့်လုံးဝမတိကျသော်လည်း၊ အားလုံးပိုမိုပါဝင်နိုင်သည်၊ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့မကျေနပ်ပါ) ။
သူတို့ကသူတို့ရဲ့စတိုင်ကိုသူတို့ရဲ့ vintage counterp ကဲ့သို့တူညီသောဒိုင်းလွှားပုံစံကိုဝေမျှနေစဉ်arts ပုံနှိပ်ခြင်း - မျှော်လင့်ထားသည့်အတိုင်းအသေးစိတ်ပိုပါ ၀ င်သည်၊ လည်ပင်းတွင်ကွင်းဆက်မေးလ်နှင့်ရှေ့နှင့်နောက်တစ်ဝိုက်တွန့်ခြင်းတို့ပါ ၀ င်သည်။ အပြာရောင်အင်္ကျီဒီဇိုင်းသည်ခြေထောက်များတွင်ဆက်လက်ရှိနေပြီးနောက်ထပ် chainmail အသေးစိတ်များပါ ၀ င်သည်။ ၎င်းတို့သည်စတိုင်လ်နှင့်ခေတ်မီဒီဇိုင်းများကိုပေါင်းစပ်။ minifigures များကိုထင်ဟပ်စေသည် 21325 အလယ်ခေတ်ပန်းပဲဆရာ.
အခြား minifigure တွင်သူ့အကြောင်းစတိုင်လ်အရိပ်တစ်ခုရှိသည်၊ ဒါပေမယ့် Castle theme မှလာတာထက်ဒီပုံကသူထွက်သွားတာနဲ့တူသည် classic အနက်ရောင်ဘောင်းဘီရှည်နှင့်စုတ်ပြဲနေသောစွပ်ကျယ်ကို ၀ တ်ဆင်ထားသည်။ မျက်နှာသည်မကြာခဏတွေ့ရများသောအရာဖြစ်သည် Lego CITY အစုံများ (များသောအားဖြင့်မီးသတ်သမားသို့မဟုတ်အမှိုက်သိမ်းသူ) ကိုကိုယ်စားပြုသည်။
၎င်းသည်သင့်တော်လုံလောက်သော minifigure တစ်ခုဖြစ်ပြီးသူ့အတွက်ကွဲပြားခြားနားသောဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံများစွာရှိသည်၊ သို့သော်ကျန်အစုံသည်စစ်မှန်သောအခါဤ minifigure သည်အမှန်တကယ်ပေါ်လွင်ပြီးနေရာတစ်နေရာလုံးကိုခံစားရသည်။ ဘုရင်တစ် ဦး (သို့) မှော်ဆရာ (သို့) အပျိုမတစ်ယောက်၏ကိုယ်စားပြုမှုသည်ပိုသင့်တော်လိမ့်မည်။
Creator 3-in-1 set များသည်အကောင်းဆုံးတန်ဖိုးဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်သည် Lego ၎င်းသည်လက်ရှိစျေးကွက်တွင်ရှိသည်၊ ဤအစုသည်ခြွင်းချက်မဟုတ်ပါ။ အဓိကရဲတိုက်သည်ပျော်စရာကောင်းသောတည်ဆောက်မှုနှင့်ခမ်းနားထည်ဝါသောပုံစံဖြစ်ပြီး၎င်းသည်စျေးနှုန်းသက်သက်နှင့်သာတန်သည်၊ သို့သော်အခြားတည်ဆောက်မှုနှစ်ခုသည်အလွန်အံ့သြဖွယ်ကောင်းသည်။ မျှော်စင်သည်ဝှက်ထားသောလျှို့ဝှက်ချက်များများစွာပါ ၀ င်နေပြီးစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းပြီးအလယ်ခေတ်စျေးကွက်သည်ကစားရန်အလားအလာများစွာကိုပေးသည်။ တည်ဆောက်မှုတစ်ခုစီတိုင်းသည်၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်အခွင့်အရေးအတွက်ထိုက်တန်သောသတ်မှတ်မှုတစ်ခုပြုလုပ်လိမ့်မည်၊ ထို့ကြောင့်ထည့်သွင်းစဉ်းစားခြင်းဖြင့်၎င်းသည်ငွေအတွက်မယုံနိုင်လောက်အောင်တန်ဖိုးကျစေသည်။
ရဲတိုက်သည်တစ်ခုအပါအ ၀ င်ဖြစ်သည် Lego အဖွဲ့၏ရေရှည်တည်တံ့သောအခင်းအကျင်းများ - ၎င်းသည်နှစ်များအတွင်းမရှိခြင်းကိုရွက်လွှင့်ခဲ့လျှင်ပင်တစ်သက်တာ Lego ပရိသတ်များသည်အနည်းဆုံး vintage Castle set တစ်ခုပိုင်ဆိုင်လိမ့်မည်မှာသေချာသည်။ 31120 အလယ်ခေတ်ရဲတိုက် ထို retro builds များကို update လုပ်ရန်အလွန့်အလွန်ရိုးရှင်းသောနည်းလမ်းတစ်ခုကိုကမ်းလှမ်းသည်သာမကအပိုမော်ဒယ်များပါ ၀ င်သောခေတ်ဟောင်းအဆောက်အအုံများကိုပိုမိုခေတ်မီသောအဆောက်အအုံများသို့ထည့်ရန်အခွင့်အလမ်းကိုပေးသည်။ 21325 အလယ်ခေတ်ပန်းပဲဆရာ.
မော်ဒယ်သုံးခုစလုံးမှာရှားပါတယ် Creator 3-in-1 set များသည်အရည်အသွေးမြင့်မားသောကြောင့်တည်ဆောက်ရန်မည်သည့်အရာများနှင့်ဖြစ်နိုင်ချေများစွာကိုရွေးချယ်ရခက်စေသည် 31120 အလယ်ခေတ်ရဲတိုက် ၎င်းသည်စွယ်စုံရဆုံးဖန်တီးသူအစုံများထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။ အဟောင်းပရိတ်သတ်များသည်ဤသတ်မှတ်ချက်များကိုလွမ်းဆွတ်နှစ်သက်လိမ့်မည်၊ ၎င်းသည်အလွန်နှစ်သက်ဖွယ်ကောင်းသောတည်ဆောက်မှုအတွေ့အကြုံဖြစ်သောကြောင့်ပရိသတ်အသစ်များသည်လုပ်ငန်းစဉ်ကိုနှစ်သက်လိမ့်မည်။ တန်ဖိုးအဆိုပြုချက်သည်အတော်လေးeဖြစ်သည်xtraသာမာန်၊ အသက်ရှည်စေသောအစုံကိုရှာဖွေနေသူများသည်၎င်းကို spades တွင်တွေ့လိမ့်မည်။
တိုတိုပြောရရင်, 31120 အလယ်ခေတ်ရဲတိုက် အလွန်တောက်ပသောအစုံဖြစ်သည်၊ ထို့ကြောင့်ဤသုံးသပ်ချက်ကိုဖတ်ပြီးရပ်။ ၎င်းကိုသွားပါ။ သင်နောင်တရလိမ့်မည်မဟုတ်။
ကျေးဇူးပြု၍ ထိုအလုပ်ကိုထောက်ခံရန်စဉ်းစားပါ Brick Fanatics သင့်ရဲ့မိတ္တူဝယ်ယူခြင်းဖြင့်ပါဘူး 31120 အလယ်ခေတ်ရဲတိုက် ငါတို့သုံးနိုင်သည် တွဲဖက်လင့်ခ်များ။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်!
LEGO တည်ဆောက်ရန်ဘယ်လောက်ကြာမလဲ Creator 3-in-1 ၃၁၁၂၀ အလယ်ခေတ်ရဲတိုက်
အဓိကတည်ဆောက်မှုကိုပြီးစီးအောင်ပြုလုပ်နိုင်သည် 31120 အလယ်ခေတ်ရဲတိုက် ဖြစ်နိုင်ရင်လေးနာရီလောက်ကြာလိမ့်မယ်။ သင်ကအခြားမော်ဒယ်နှစ်ခုကိုတည်ဆောက်ဖို့စိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုရင်နာရီဝက်လောက်ကြာလိမ့်မယ်art ရဲတိုက်မှ ထွက်၍ အခြားတည်ဆောက်ရန်အတွက်နှစ်နာရီစီ (ap ယူရန်လိုအပ်သောအပိုအချိန်art မော်ဒယ်များကို ထပ်မံ၍)
Lego ထဲမှာဘယ်လောက်အပိုင်းအစတွေရှိလဲ Creator 3-in-1 ၃၁၁၂၀ အလယ်ခေတ်ရဲတိုက်
31120 အလယ်ခေတ်ရဲတိုက် အစိတ်အပိုင်း ၁၄၃၆ ခုပါ ၀ င်သည်။ အဓိကရဲတိုက်တည်ဆောက်ရန်အစိတ်အပိုင်းအားလုံးလိုအပ်သည်၊ မျှော်စင်နှင့်စျေးကွက်မြင်ကွင်းသည်ထိုအပိုင်းအစများကိုသာလိုအပ်ပြီးစျေးအနည်းငယ်ကို p ကို သုံး၍ စျေးကွက်နှင့်တကွartတည်ဆောက်မှုသုံးခုစလုံးမှာ
Lego ဘယ်လောက်ကြီးလဲ Creator 3-in-1 ၃၁၁၂၀ အလယ်ခေတ်ရဲတိုက်
များအတွက်အဓိကတည်ဆောက် 31120 အလယ်ခေတ်ရဲတိုက် အမြင့် ၂၆ စင်တီမီတာ၊ အကျယ် ၃၁ စင်တီမီတာနှင့်အတိမ်အနက် ၂၈ စင်တီမီတာရှိသည်။ ရဲတိုက်သည်ရဲတိုက်ထက်ပိုမြင့်သော်လည်းအကျယ်မကြီးပါ။ ဈေးသည်သုံးဆိုင်အနက်အသေးငယ်ဆုံးဖြစ်သည်။
Lego ဘယ်လောက်ကျပါသလဲ Creator 3-in-1 ၃၁၁၂၀ အလယ်ခေတ်ရဲတိုက်ကုန်ကျစရိတ်
31120 အလယ်ခေတ်ရဲတိုက် ယူကေတွင် ၈၉.၉၉ ယူရို၊ အမေရိကန်တွင် ၉၉.၉၉ ဒေါ်လာနှင့်ဥရောပတစ်လွှားမှ ၉၉.၉၉ ဒေါ်လာကျသင့်သည်။ မော်ဒယ်သုံးမျိုးစလုံးသည်တည်ဆောက်ပုံနှင့်ကစားပုံနှင့်ပြသပုံရွေးချယ်မှုများအရအလွန်ကောင်းမွန်သည်ကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားလျှင်၎င်းသည်ငွေအတွက်အလွန်အံ့သြဖွယ်ကောင်းသည်။
← LEGO အကြောင်းအသေးစိတ် Star Wars ကြောက်စရာပုံပြင်များ
LEGO Model Designer သည်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်တည်ဆောက်သူများအတွက်အဓိကကျွမ်းကျင်မှုများကိုဖော်ပြသည် →